अभिनेत्रि शिल्पा र छविबीच फेरि झगडा नगर्ने सहमति -
२०७६, २६ असार बिहीबार १६:११ July 11, 2019 clickonLeaveaComment on अभिनेत्रि शिल्पा र छविबीच फेरि झगडा नगर्ने सहमति
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र छवि ओझाबीच अब झगडा नगर्ने सहमति भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बिहीबार उनीहरुलाई सहमति गराएको हो।बिहीबार दुबै पक्षलाई टेकुमा बोलाएर सहमति गराएको परिसरका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
‘शिल्पा पोखलेरले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दिनु भएको थियो, हामीले दुबै पक्षलाई राखेर सुनुवाइ गर्‍यौं’, प्रवक्ता बोगटीले भने,‘उहाँहरुबीच अब झगडा नगर्ने सहमति भएको छ ।’ सँगै बस्ने र नबस्ने उहाँहरुको व्यतिगत कुरा हो।’
परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार पोखरेलको सुरक्षामा आँच नपुग्याउने गरी ओझाले लिखित सम्झौता गरेका छन् । त्यसक्रममा ओझाले शिल्पासँग माफी पनि मागेका थिए ।
शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै शिल्पाले गत सोमबार छविविरुद्ध उजुरी दिएकी थीइन्। गोप्य रुपमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका शिल्पा र छविको जोडीको विवाहको विषय गतवर्ष खुलेको थियो।
नायिका रेखा थापासँग डिभोर्स भएपछि छवि शिल्पासँग सम्बन्धमा थिए। शिल्पालाई म्युजिक भिडियोबाट ठूलो पर्दामा प्रवेश गराएका छविले विस्तारै आफ्नै घर भित्र्याएका थिए। विवाहाघि लामो समयसम्म सँगै बसेपनि उनीहरुले सम्बन्धबारे भने खुल्न चाहेका थिएनन्।
आलियाले भनिन – करणको ‘कठपुतली’ भन्दा मलाई फरक पर्दैन
२०७६, १८ बैशाख बुधबार १४:५६ May 1, 2019 clickon
दिशाको दुखेसो – मैले टाईगरका लागि आगोमाथि दौडने काम समेत गरेँ तर…!
२०७६, १४ जेष्ठ मंगलवार १६:३३ May 28, 2019 clickon
के तपाईं आशिश राणा (लाउरे) लाई चिन्नु हुन्छ??? को हुन त लाउरे – ल पढ्नुस् र हेर्नुस्।